Granit Xhaka oo Albaabada u furay inuu ku biiro Koox ka dheesha Premier League kaddib markii uu go’aansaday inuu ka tago Arsenal – Gool FM
(London) 16 Nof 2019. Sida wararku ay sheegayaan Granit Xhaka ayaa alabaabada u furay inuu ku biiro koox ka dheesha horyaalka Premier League kaddib markii uu go’aan ku gaaray inuu isaga tago Arsenal.
Kooxda Newcastle United ayaa ku rajo wayn inay heshiis amaah ah ku qaadato suuqa Janaayo Xiddiga Arsenal ee Granit Xhaka, kaddib markii laacibkan khadka dhexe uu go’aansaday inuu isaga tago Gunners.
Xiddiga xulka qaranka Switzerland ayaan u ciyaarin kooxdiisa tan iyo markii uu aflagaado u geystay taageerayaasha goortii la bedelay kulankii barbaraha 2-2 ku dhammaaday oo ay la galeen Crystal Palace bishii October.
Xhaka ayaa markii dambe laga xayuubiyay kabtanimada kooxda, laakiin qaar ka mid ah xubnaha kooxda ayaa dareensan in macallin Unai Emery uu si aan cadaalad ahayn ula dhaqmay laacibka Swiss.
Xiddigan khadka dhexe ayaa sii haynaya xilkiisa kabtannimo ee xulka, laakiin waxa uu ka walwalsan yahay in ciyaaris la’aantiisa kubadda heerka kooxeed ay ku sababto inuu lumiyo sharaftiisa.
Sidaas darteed Xhaka ayaa go’aansaday inuu isaga tago Arsenal bisha Janaayo, Jariiradda The Telegraph ayaana warinaysa in kooxda Newcastle ay si aad ah amaah ugu doonayso inay ku qaadato xiddigii hore ee Kooxda Borussia Monchengladbach.
Macallin Steve Bruce ayaa doonaya in xiddigo qibrad leh uu ku soo daro kooxdiisa da’yarta ah ee uu haysto, waxaana uu jecel yahay inuu la soo wareego 27-sano jirkaan Xhaka.
Yeelkeede, Newcastle ayaa saxiixa xiddigan Xhaka waxa ay tartan adag kala kulmeysa kooxda ka dhisan horyaalka Serie A-da Talyaaniga ee AC Milan oo iyadana ka mid ah kooxaha doonaya saxiixa xiddigan reer Switzerland.
Si kastaba ha noqotee, way iska cadahay in Xhaka uusan mustaqbal ka arkin Kooxda ka dhisan Waqooyiga London iyo in Macallin Unai Emery uu haatan ku faraxsan yahay inuu iska iibiyo xiddiga xulka qaranka Switzerland.